Sistemụ 1-mpaghara - Delta Application Technics
Banye na otu "usoro sistemụ 1"
Ntinye akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ akpaghị aka nke 1-mebere obere gluu na-ekpo ọkụ / dị ọkụ
E mepụtara uzo DBM iji mee ka mmiri na-agbaze mgbe niile yana ihe nrụpụta na-agbadata ala dị ala / na-ekpo ọkụ na mkpa nchekwa dị mkpa.
bipụtara Manual, akpaghị aka
Ngwa akpaghị aka nke gluu 1-na - agbanye n'ime mpempe windo ụgbọ ala
Ebuputara DHA100 ka ewee tinye mmanu mmachi 1 dị n’ime ihe na-ejide ya. Ihe eji ejide ya bu akuku ahihia nke debere ala ala windo ugbo ala akuku. Ha na obere windo na - ejikọ windo na - eme ka windo na - agagharị na ala.
Nwụnye a, nke nwere usoro usoro iji doses dị mfe, na-ahụ maka itinye ntinye gbaa ugboro ugboro, na-ezere usoro nhicha ọzọ iji wepu gluu oke. Enwere ike idowe ihe jidere ya na windo ahụ ozugbo ngwa ngwa gluu gasị.
Igwe eji arụ ọrụ
DRU bụ igwe mgbapụta mmiri maka ngwaahịa viscous dị elu, nke Delta Application Technics mepụtara. Ọ na-emezu ihe achọrọ nchekwa iji hụ na gburugburu ebe ọrụ nchekwa maka ndị ọrụ gị.
Ebe a na-eme mkpụghe
Ntinye nke ngwongwo 1-mejuputara
Usoro pneumatic dị mfe iji tinye ngwaahịa viscous dị elu sitere na paụnd 20 l ma ọ bụ drum 200 l. Ejiri igwe mbukwu okpukpu abụọ, piston / shọvel okpukpu abụọ na efere onye na-eso ụzọ akara abụọ. Dabere na ngwa na usoro achọrọ maka ya, enwere ike ịgbakwunye mmiri dịka nchịkọta, ihe nrụpụta ngwaahịa,…